ဘဝမှာ အချစ်ရဆုံးသားကြီး ရေမွန် မရှိတော့တဲ့နောက် အမေများနေ့ဆိုတာ သူနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ခင်မြတ်မွန် – Shwe Likes
ဘဝမှာ အချစ်ရဆုံးသားကြီး ရေမွန် မရှိတော့တဲ့နောက် အမေများနေ့ဆိုတာ သူနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ ခင်မြတ်မွန်
Shwe | January 19, 2022 | Celebrity | No Comments
ပရိတ်သ တ်တွေ အတွက် သီချင်းကော င်းများစွာ သီဆို ခဲ့ပြီး အားလုံး ကချစ် ကြတဲ့ idiots ဂီတအဖွဲ့က ပင်တိုင်အဆိုေ တာ်တစ်ဦးြ ဖစ်တဲ့ ကိုရေမွန် ဟာ မမျှော်လင့် ပဲ ဇွန် (၂၃) ရက်မနက်ပို င်းမှာ ကွယ်လွန် သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေေ အာင် နေတတ်ထို င်တတ်ပြီး သူချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အပေါ်လည်း တာဝန်ကျေပွန်လွန်းတဲ့ ရေမွန်ကိုဆုံး ရှုံးလိုက်ရတာ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မြတ်မွန်က သားဖြစ်သူအတွက်ရင် ကွဲမတက်ခံစားနေ ရတာ ယနေ့တိုင်ပါပဲ။
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သားကိုသတိ ရတမ်းတေ နတဲ့ ခင်မြတ် မွန်ဟာ ဇန်နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့ အမေများနေ့မှာ အခြားမိခင်တွေ နည်းတူမပျော်ရွှ င်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကို အခုလိုပဲပြော လာပါတယ်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ 3/4 ရက်ထဲက ဟိုတွေးဒီတွေး တွေးရင်း
တွတ်ပီကို အရမ်းသတိယနေခဲ့တာ ဒီရက်ထဲအလုပ်တွေလုပ်၊ပင်ပန်းပြီး
H.m.d ကိုလဲသတိမရ၊မေ့လျော့နေခဲ့တယ် မနေ့ညကကြည့်တော့မှ
သူများတွေသူတို့အမေတွေကို ဂါရဝပြု နှုတ်ဆက်တာတွေတင်ထားလို့
H.m.d ရောက်ပြီ..သိလိုက်ရတာ. သိတော့ရော ကိုယ့်အတွက်
ဘာမှမထူးတော့ပါဘူး. အချစ်ဆုံးကြီးမှ မရှိတော့တာ
Happy mother’s day ဆိုတာ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နေတဲ့ အမေတွေ
နဲ့ဘဲ လိုက်ဖက်သင့်တော်တာပါ ရင်ကွဲနာကျနေတဲ့အမေနဲ့မသက်ဆိုင် တော့ပါဘူး
တုံတုံက Pizza တစ်ဘူးမှာပေးတယ်. တွတ်ပီလေးသာရှိသေးရင်
ဒီအချိန် သူ့အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ကြားက ပေါကျခလြာပွီး အျိမျတံခါးလာခေါကျမယျ
တံခါးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ Happy mother’s day မေကြီးဆိုပြီး
Pizza တို့ 77 Cheese Cake တို့ လာပို့ဦးမှာအသေအချာ !!! 💕
အရမ်း လွမ်းတယ် တွတ်ပီ !!! 😥💔
ရောက်ရှိရာဘုံဌာနမှာ အဆင်ပြေအေးချမ်း‌ပျော်ရွှင်ပါစေ.. 🌹” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း ခင်မြတ်မွန်အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Source : Khin Myat Mon’s Facebook Acc
ပရိတ္သ တ္ေတြ အတြက္ သီခ်င္းေကာ င္းမ်ားစြာ သီဆို ခဲ့ၿပီး အားလုံး ကခ်စ္ ၾကတဲ့ idiots ဂီတအဖြဲ႕က ပင္တိုင္အဆိုေ တာ္တစ္ဦးျ ဖစ္တဲ့ ကိုေရမြန္ ဟာ မေမၽွာ္လင့္ ပဲ ဇြန္ (၂၃) ရက္မနက္ပို င္းမွာ ကြယ္လြန္ သြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အားလုံးနဲ႔ အဆင္ေျပေ အာင္ ေနတတ္ထို င္တတ္ၿပီး သူခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြ အေပၚလည္း တာဝန္ေက်ပြန္လြန္းတဲ့ ေရမြန္ကိုဆုံး ရႈံးလိုက္ရတာ မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခင္ျမတ္မြန္က သားျဖစ္သူအတြက္ရင္ ကြဲမတက္ခံစားေန ရတာ ယေန႔တိုင္ပါပဲ။
ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း သားကိုသတိ ရတမ္းေတ နတဲ့ ခင္ျမတ္ မြန္ဟာ ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အေမမ်ားေန႔မွာ အျခားမိခင္ေတြ နည္းတူမေပ်ာ္ရႊ င္နိုင္တဲ့အေၾကာင္း ကို အခုလိုပဲေျပာ လာပါတယ္။
“လြန္ခဲ့တဲ့ 3/4 ရက္ထဲက ဟိုေတြးဒီေတြး ေတြးရင္း
တြတ္ပီကို အရမ္းသတိယေနခဲ့တာ ဒီရက္ထဲအလုပ္ေတြလုပ္၊ပင္ပန္းၿပီး
H.m.d ကိုလဲသတိမရ၊ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့တယ္ မေန႔ညကၾကည့္ေတာ့မွ
သူမ်ားေတြသူတို႔အေမေတြကို ဂါရဝျပဳ ႏႈတ္ဆက္တာေတြတင္ထားလို႔
H.m.d ေရာက္ၿပီ..သိလိုက္ရတာ. သိေတာ့ေရာ ကိုယ့္အတြက္
ဘာမွမထူးေတာ့ပါဘူး. အခ်စ္ဆုံးႀကီးမွ မရွိေတာ့တာ
Happy mother’s day ဆိုတာ အဆင္ေျပေပ်ာ္ရႊင္ေနတဲ့ အေမေတြ
နဲ႔ဘဲ လိုက္ဖက္သင့္ေတာ္တာပါ ရင္ကြဲနာက်ေနတဲ့အေမနဲ႔မသက္ဆိုင္ ေတာ့ပါဘူး
တုံတုံက Pizza တစ္ဘူးမွာေပးတယ္. တြတ္ပီေလးသာရွိေသးရင္
ဒီအခ်ိန္ သူ႔အလုပ္ေတြရႈပ္ေနတဲ့ၾကားက ေပါက်ခၾလာပြီး အ်ိမ်တံခါးလာေခါက်မယ်
တံခါးဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ Happy mother’s day ေမႀကီးဆိုၿပီး
Pizza တို႔ 77 Cheese Cake တို႔ လာပို႔ဦးမွာအေသအခ်ာ !!! 💕
အရမ္း လြမ္းတယ္ တြတ္ပီ !!! 😥💔
ေရာက္ရွိရာဘုံဌာနမွာ အဆင္ေျပေအးခ်မ္း‌ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ.. 🌹” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကလည္း ခင္ျမတ္မြန္အတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Source : Khin Myat Mon’s Facebook Acc
သရုပ်ဆောင် ယွန်းယွန်း ရဲ့ အဖွားဖြစ်သူ အမေများအဖွဲ့မှ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒေါ်သဲနုခိုင် ကွယ်လွန်